Author: JoJokora Moogull
Waxaynu hore usoo sheegnay inay xawadu jirka haweenta ku jiri karto muddo 48 saacadood. Ha yeeshee xilliga dambe ee uurka gidaarradiisu gebi ahaantoodba waa ay qallalan yihiin, oo dabacsan yihiin, diyaarna u yihiin dhalid.
Ninku waxa uu jeclaan lahaa inay xaaskiisu iskeed u garato dookhiisa iyo rabitaankiisa isagoon u sheegin. Haweeneydu waxay u baahan tahay siddeed usbuuc si ay u qaybto Layliga Kegel.
Gudniinku waxa uu leeyahay laba waqti oo kala ah: Ubad dhalistu waa inay yeelataa afar ulajeeddo oo kala ha: Raashinka caadiga ahi waxa uu timirta kaga duwan yahay isagoo ka kooban iskudhisyo u baahan inay calooshu shiiddo oo usii jejebiso iskudhisyo ka fudud ilaa ay isu beddelaan sonkor-gulukos, isagu markaa si toos ah dhiigga u raaca. Fitamiin Aa waxa uu kamid yahay waxyaabaha aan looga maarmin tamarsiinta habdhiska taranka guurrka, isaga oo awood siiya qanjirka borostaatka raaxsda qooraha, kana qaybgala cusbooneysiinta unugyada dhinta iyo dardargelinta kuwa tabarta daran.
Shukaansigu waxa uu door muhiim ah ka cayaaraa galmada, isaga oo ah garoon tijaabo lagu eegayo ilaa iyo inta uu isu qalmo dookha labada qof. Wararku waxay sheegayaan in Carabtu adeegtooyinka dumarka addoomaha ah oo qura ay gudi jireen. Waxa dhacaysa in la murmo amaba gacanta laysula tago, midkoodna uu walaalkii ku eedeeyo inuu asagu daandaansiga billaabay.
Nabigu waxa uu dhalay afar gabdhood inuu gabdhihiisa gudayna sunnadiisa iyo siiradiisa midna laguma sheegin.
Haweenku intooda badan awood bay u leeyihiin inay xukumaan muruqa gumaarka, wuxuuse uga baahan yahay inay si fiican ugu fiirsadaan uguna feejignaadaan. Halkii tuurmo oo xawa ahi waxay u dhigantaa 3 illaa 6 sintimitir oo saddex jibbaaran, ama illaa milyan oo unugyo jinsiyeed ah. Waxaa in la xusuusnaado mudan in qanjirrada cambarku ay marmar la soo daahaan dareerahaasi, waxaana markaasi axmaqnimo ah inuu ninku isku dayo inuu geedka khasab ku geliyo, taasi oo keenaysa xanuun iyo dhibaato, gaar ahaan kolka cambarku yaryahay ama haweeneydu bekro tahay.
Last Drivers 1N4008 DATASHEET PDF DOWNLOAD
Saa kalmad dambe ma ayan orane way iska dhaqaaqday. Sidaas baa haddaba guuurka looga xayuubiyaa xubintii taranka ee Eebbe u sameeyey. Ninku intuu xaaskiisa labadeeda lugood dhex galo, oo labadiisa gacmood dhinacyada ka kala mariyo, uu dabeeto ku dul dhabbacdo.
Cadowtinimadaasi waxay la saanqaaddaa mar kasta oo ay waalidku kordhiyaan daryeelkooda dhallaanka cusub. Qaabkaani aad buu u raaxo geliyaa haweeneyda, ha yeeshee waa raaxad daaliyaa ninka. Ninkii oo xoogaa lugaha soo laabay, intay labadiisa bawdo ku dul fariisato, geedkana isgeliso, iyada oo u dul saaran sidii inay faras fuushan tahay, ay markaasi dhabarkeeda kor iyo hoos ugu dhaqaajiso.
Waxaa intaa dheer dub-duleedka habdhiska taranka oo gebi ahaanba kala baxbaxaya, oo balballaaranaya, iyo xididdada ilma-galeenka oo iyana kala furfurmaya, jeermiskuna uu dabeeto si fudud ku geli karayo. Haddaba goynta qayb jirka ka tirsan oo nabad qabtaa waxay kahor imaanaysaa dhammaan aayadaha aynu kor kusoo sheegnay. Ninkaan awoodi karinse ha soomo, soonkaa shahwada ka jebinayee.
Gabar yar oo xanxanuunsatana waan heysta gacana waxaan ka leyahay qaliin. Dadka Yuhuudda ahi dumarkooda waxay ugu galmoon jireen oo qura qaabka dhinac dhinaca, iyada oo weliba cawrada haweeneydu ay aad u asturan tahay. Ragga feerka ciyaara mar kasta oo ay murqohoodu sii dhismaan, jirkooduna sii xoogaysto, xiniinyahoodu waa ay sii yaryaraadaan. Asc wll wad mahadsantihin sida aad su.
Taa haddaynu sii faahfaahinno, waxa weeye in aanu kacayn marnaba, ama uu damayo intaanay galmadu billaaban amaba inta lagu guda jiro sidaasina aanu ku dhammaystiri karin, amaba intuu degdeg xawada iskaga tuuro, dabeeto raaracsamo, taasi oo haweeneyda ku ridda qalbijab iyo xanuun, mar haddaanay biyihii kusoo joogsaday iska saari karin, maadaama uu ninkii hawsha la waday horteed ka faraxashay oo geedkiisii hurdo bidil la yiri. Dabeeto qori dhuuban sida kan cuudka kabriidka inta la dhex suro faruuryihii waaweynaa ee qaybta laga jaray baa markaa dhinacyada laga soo qodbaa, amaba lama qodbee, labada bawdo ee inanta layku dabraa, si dhaawacii faruuryuhu isugu bogsado baanto.
Last Drivers DESCARGAR LIBRO EL CASO DEL FUTBOLISTA ENMASCARADO PDF
Bushimaha oo lagu xantaxanteeyo ibaha naasaha. Waxa laga yaabaa in rag badani kolka ay biyabbaxaan, u qaataan in hawshii galmadu ay dhammaatay, dabeetana intay dhinaca kale u jeestaan khuuro billaabaan, iyaga oon dheg jalaq u siin dhibaatooyinka uu falkoodaasi u geysanayo haweeneyda. Saa darteed isagoo daryeelaya dareenka ilmahaa yar ayuu Rasuulku amar ku bixiyey inaanu ninna golaha fadhiga ku dhex fariisan wiil iyo aabbihii ee iyaga lays xijiyo.
Beentu waxa weeye runta oo la mijaxaabiyo, jagada laga qaado, jiritaankeedana laysku dayo in la tirtiro. Fitamiin Bii-1 isagu waxa uu gacan guurkka geeystaa xoojinta qanjirrada taranka iyo firfircooneynta insiimada qabta shaqooyinka bayolojiyeed ee jirka.
Dhibaatooyinkaasi oo si gaar ah khatar ugu ah haweeneyda uurka leh iyo ilmaha caloosheeda ku jira labadaba. Marka maxay ka qabta diinta inann caruurtas iska soo rido3 raaxxada waye uurka hadda. Waxaa laga yaabaa in hadalkaasi uusan mar kasta sax noqon karin, marka laga eego nin kasta iyo naag kasta, waxase uu sax noqon karaa kolka uu arrinku joogo labada isqaba!
Eebbe waxa uu aayaddiisa ku leeyahay:. Waa inaanay jilbaab usoo xiran habeen raaxasa kulul yahay oo uu galmo diyaar u yahay, waase inay usoo xirataa dhar khafiif ah oo layska dhex arkayo, isla markaana ay sidii qof waaya aragnimo iyo xikmad leh ula dooddaa, caqligiisana la hadashaa, rag fara badan baana dumarka caynkaas ahi soo jiitaan. Waxay weysaa raaxadii ay ka heli lahayd galmada saxda ah, waxana nafteeda ku dhasha welwel iyo walbahaar, dareentaana inay baadi tahay, guufka dabayshu u socotana ka hor jeeddo, iyadoo weliba isu qaadata inay samaynayso hawl ay ku khasban tahayna.
Ragga waxa lagula dardaarmayaa inay dumarkooda isu qurxiyaan oo isu carfiyaan.